Horumarinta app -ka moobiilku waa hab lagu dhiso codsiyada moobilka ee ku shaqeeya aaladaha mobilada. Codsiyadaan midkood waa la sii rakibi karaa ama waa la soo dejisan karaa oo rakibi karaa adeegsadaha goor dambe. Waxay adeegsadaan awoodaha shabakadda ee aaladda si ay uga shaqeeyaan ilaha xisaabinta meel fog. Sidaa darteed, habka horumarinta app -ka moobiilka wuxuu u baahan yahay abuurista softiweer lagu rakibi karo aaladda, iyo awood u siinta adeegyada gadaal u helidda xogta iyada oo loo marayo API -yada, iyo tijaabinta dalabka aaladaha bartilmaameedka ah. shuruudaha qalabka, iyo dhinacyo badan oo kale oo ka mid ah geedi socodka horumarinta abka.
Labada aaladaha moobiilka ee ugu muhiimsan waa macruufka Apple Inc. iyo Android oo ka socda Google. IOS waa nidaamka hawlgalka moobiilka ee Apple oo si gaar ah loogu dhisay iPhones. Android, si kastaba ha ahaatee, waxay ku shaqeysaa aaladaha mobilada ee ay soo saareen OEM -yada kala duwan, oo ay ku jirto Google. In kasta oo ay jiraan waxyaalo badan oo isu eg, haddana xirmooyinka horumarinta softiweer ee kala duwan (SDKs) ayaa loo adeegsadaa aalado kala duwan. Apple waxay u isticmaashaa macruufka si gaar ah aaladooda, halka Google ay Android u diyaarisay shirkado kale oo buuxiya shuruudo gaar ah. Soo -saareyaashu waxay dhiseen in ka badan 1.5 milyan oo dalab oo ah labada meelood ilaa maanta.
Waxaad u wajahi kartaa horumarinta app -ka moobiilka afar siyaabood oo kala duwan:
Dhis Codsiyada Mobile -ka ee Dhaladka ah
Dhiso Codsiyada Mobile-ka ee Dhaladka ah
Dhis Codsiyada Mobile -ka ee Hybrid